Baolina kitra : Malagasy mirahalahy hijery ny amboara eran-tany any Rossia -
AccueilVaovao SamihafaBaolina kitra : Malagasy mirahalahy hijery ny amboara eran-tany any Rossia
13/06/2018 admintriatra Vaovao Samihafa 0
Na mbola tsy tafakatra tamin’ny dingana famaranana aza, dia tsy diso anjara ny Malagasy. Ankoatra ny fetim-pirenena, dia hetsika goavana iray hifantohan’ny sain’ny maro ihany koa ao anatin’ity volana jona ity ny fiadiana ny amboara eran-tany eo amin’ny baolina kitra izay tanterahina any Rossia ny 14 jona ka hatramin’ny 15 jolay. Ho an’ny zava-pisotro coca-cola, izay mpanohana ofisialy ny fiadiana ny amboara eran-tany hatramin’ny taona 1978, ary mbola hitohy hatramin’ny 2030, dia loka maherin’ny 25 000 no atolotra ireo tsara vintana sy mahay milalao mandritra io hetsika io. Isan’ireo loka goavana amin’izany lalao izany, teratany Malagasy mirahalahy no hijery mivantana ny amboara eran-tany any Rossia. Izy ireo dia mpiara-miombon’antoka amin’ny orinasa Star, izay mpaninjara ny vokatra Coca-cola. Lalao roa no hojeren’izy ireo amin’izany dia ny 26 jona hihaonan’i Danemark sy Frantsa, ary ny 27 jona amin’ny lalao hifandonan’i Serbie sy Brezila.
Ankoatra izay anefa, dia hisy ihany koa ny hetsika fanentanana amin’ireo toeram-pivarotana sy amin’ny toerana vory vahoaka eto Antananarivo sy amin’ireo tanàn-dehibe sasany eto Madagasikara. Ao anatin’izany ny seho fampahafantarana, ny fifaninanana lalao vidéos, « pronostique »…
Hanomboka ny volana jolay dia misy ny fandefasana mivantana ireo lalao amin’ireo toeram-pialamboly samihafa. Ny 15 jolay kosa dia hisy ny fandefasana amin’ny fahitalavitra lehibe ny lalao famaranana.
Firaketana an-tsoratra (PV) : Andrasana eny amin’ny Ceni anio